admin | မမွငျရသောခရီးစဉ်ထိုင်း
ပွင့်လင်းအားလပ်ရက်များနှင့်အားလပ်ချိန်, ပင်လယ်ကနေအဆုံးမဲ့ Aleenta ရဲ့သဘာဝကမ်းခြေဘဝမှဘာမှ. သမုဒ္ဒရာ၏အသံ, မပျက်စီးသောလေ, နှင့်ပျော့ပျောင်းသောနေရောင်သည်သင်၏သီးသန့်အားလပ်ရက်များကိုသဟဇာတဖြစ်ခြင်းနှင့်ဟန်ချက်ညီစေသည်. ဤအပန်းဖြေစခန်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာကြီးကို Sky နှင့် Earth သီးသန့်အိမ်များဖြင့်ဖန်တီးရန်ဖိတ်ခေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်, ယောဂသင်ခန်းစာ, ထိုင်းချက်ပြုတ်သင်တန်း, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးလေးလေလေတိုက်ခတ်သံတွေကနေတုန်ခါနေတဲ့ခေါင်းလောင်းသံကိုနားထောင်ရုံနဲ့အတူတကွမှော်အတတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခံစားချက်ကိုအတူတကွရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်. ဘန်ကောက်မှသုံးနာရီ, မင်းကhaoSamRoiYotNationalပန်းခြံကိုသွားလည်နိုင်ပါတယ်, ဟွာဟင်မြို့, Khao Wang နှင့် Wat Khao Tao ကဲ့သို့သောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနေရာများ.
183 မိုး 4, Paknampran, Pranburi , Pranburi, ဟွာဟင် / ချမ်မန်း, ထိုင်းနိုင်ငံ
တည်နေရာ & အခန်းအမျိုးအစား…ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
This entry was posted in ဟွာဟင်းဟိုတယ် on သြဂုတ်လ 19, 2012 အားဖြင့် admin.
အရောင်, Purimuntra အပန်းဖြေစခန်းနှင့် Spa သို့အလွယ်တကူလည်ပတ်နိုင်ခြင်းသည်တည်မြဲသောစွဲမှတ်မှုများကိုဖန်တီးပေးနိုင်ရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်နှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေသောဝန်ဆောင်မှုများအတွက်နေရောင်ခြည်နှင့်လတ်ဆတ်သောအတွေ့အကြုံကိုတံဆိပ်ခတ်ထားသည်။. အပန်းဖြေစခန်းသည် Pranburi တွင်တည်ရှိသည်, ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်အဓိကအသစ်သော ဦး တည်ရာ. 19-ကာယရေးအဆင်ပြေသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသည့်အရှေ့တိုင်းပုံစံအပန်းဖြေစခန်းအခန်း. A mix between modern-style architecture and oriental sense on cozy romance and chic atmosphere by Naresuan Beach offers even more fresh alternatives to the typical guest’s stay. Amidst the tranquility of the natural landscape, you will enjoyawalk along the private beach leading you to Kaloak Hill (Towkosa National Park) which lies 400 matre away.
97 မိုး 4, Pranburi, Prachuap Khiri Khan
တည်နေရာ & Room Types… ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
This entry was posted in ဟွာဟင်းဟိုတယ် on သြဂုတ်လ 16, 2012 အားဖြင့် admin.
Once uponatime, ယခင်ကထိုင်းစတိုင်ကျွန်းတစ်ကျွန်းရှိကိုလိုနီခေတ်တွင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသောမိသားစု၏ယခင်ဂုဏ်ကျက်သရေကိုခံစားကြည့်ပါက Ban Bayan ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်, ဟွာဟင်, ဆန္ဒတစ်ခုအားကြီးသောသမိုင်းထိတွေ့အတူ. The 21 rooms of Ban Bayan cater toadiscerning and selective group of guests who yearn for an ambience that’s both unique and sophisticated. A place where they can simply experience the serenity ofacolonial-style beach house amidst rich history and culture. Spendingaminute at the sundecks, you will feel the endless relaxation while undeniably breathing in the sea wind. The famous attractions such as Pranburi and Pa La-u Water Fall are close by and await your visit.
119 Petchkasem Road,Prachuap Khirikhan, Hua Hin Beachfront, ဟွာဟင် / ချမ်မန်း, ထိုင်းနိုင်ငံ
This entry was posted in ဟွာဟင်းဟိုတယ် on သြဂုတ်လ 14, 2012 အားဖြင့် admin.
Onaday with clear skies, လေအသင့်အတင့်မှုတ်, Khung Wiman သဲသောင်ပြင်တွင်လှိုဏ်ဂူများကျရောက်, လှပသောလေထီးတစ်စီး၏လှပသောအင်ဂျင်နီယာအတောင်ပံများပေါ်တွင်ပင်လယ်ပြင်ပေါ်မျောနေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်. Open your eyes toanew point of view with paragliding.
TAT Rayong Office +66 3865 5420 သို့ 1 , +66 3866 4585
This entry was posted in ထိုင်းအစိမ်းရောင်ခရီးသွား on သြဂုတ်လ 14, 2012 အားဖြင့် admin.
Chiang mai Province. အေးမြသောနွေရာသီညများတွင်မြို့၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလမ်းများကိုသွားခြင်းသည်ဤမြို့ပြထိုင်းနိုင်ငံ၏အပျော်ဆုံးစီးနင်းခြင်းအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။. Chiang Mai အပြင်ဘက်တွင်အဆင်ပြေလွယ်ကူသောနေရာနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသူများနှင့် ၄ င်းလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောအခြားသူများမှရွေးချယ်ထားသောလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားသည်။, at the crack between Huai Tueng Thao and Doi Suthep National Park.The route itself makes foragloriously amiable shotgun-wedding between the area’s mountainous forests and lychee fields, andanumber of more urbane amenities and activities with which to fill itinerary and stomach.
Starting from one of the bike rental shops on Sam Lan Road which runs past Wat Phra Sing, leave the city walls from the west, following the northbound quadrant of the moat up until the intersection at its corner before turning left down Huai Kaeo Road Pass Chiang Mai’s oldest shopping mall and keep going until the second large intersection, there, takeanorthward righturn. 1 km in, you can get off the main road and follow the dirt path running along the parallel canal, following the signs for the 700-Year Stadium, where you turn left at after5km. huai Tueng အားကစား, actuallyareservoir, is justabit further down the road.
This entry was posted in ထိုင်းအစိမ်းရောင်ခရီးသွား on သြဂုတ်လ 9, 2012 အားဖြင့် admin.